Muungaab ” Dhagax waa dhaaftay Magalada Muqdisho Ganjeelaa ku xiran laamigeeda” – XAMAR POST
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahna Hoggaamiyaha Xisbiga Cadaaladda Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa ka hadlay culeysyada dadka Magalada Muqdisho ka heysta dhinaca isku socodka iyo saameynta ay reebeen jidadka xiran.
Waxa uu sheegay in Gaadiidka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan kuwa kasoo baxa dekadda Muqdisho ay ku qaadato in uu tago suuq Bacaad ama Bakaaraha mudo Saddex Maalmood ah,taasina ay qeyb ka tahay jidadka ugu muhiimsanaa Magalada Muqdsho oo dowladda xirtay.
“Magaladaan dhagax in lagu xiro waa ay dhaaftay waxaa ay marayesaa in Ganjeelo lagu xiro,baabuurka dekadda kasoo baxa oo badeecadaha Bakaaraha ama suuq bacaad u sido saddex maalin ayay ku qaadaneysaa walba Canshuur xadhdaaf ahna waa laga qaadaa ayuu yiri Muungaab”.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay Muungaab in guddoomiyaha Cusub ee Gobolkan Banaadir uu ku guuleysan karo in uu furo wadooyinka xiran ee Magalada Muqdisho hadii Madaxda Dowladda Soomaaliya ay fursad u siiso.
Hadalkaan ayaa Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahna Hoggaamiyaha Xisbiga Cadaaladda Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa waxaa uu ka sheegay munaasabad uu xilka kula wareegayay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Fillish) oo uu ka qeyb-galay.